Fitaovana elektrikaikomika vita amin'ny elektrika-fanentanana
Home / Media Series Frequency / Fitaovana fanodikodinan-jaza elektromagnetika
Sokajy: Media Series Frequency Tags: Masinina elektronagnetika, Fangalarana elektromagnetika, Elektronika fanotaniana elektromika, Masinina milina fanoratanana, Fangalan-tsofina elektronika, Hanana ny avotra elektromagnetika, Ny fihenan'ny elektromagnetika, Lafaoro meloka elektromagnetika
fahan'ny TOSIKARATRA 3 phase, 380V, 50-60Hz
Output Power 60KW
Oximity frequency 30-150KHz
Max Input Current 90A
Dingana Cycle 100%
Heating Current 15-145A
Size Main 680X370X640mm
1.With high frequency up to 150KHZ, and very thin parts and parts can be heated easily.
Ny 2.IGBT sy ny teknolojia tsy miasa ankehitriny dia nampiasaina; Mihoatra ny fahamendrehana sy ny fandaniana ambany kokoa.
Ny 3.100% cycle cycle, ny fiasana tsy tapaka dia mahazo alalana faran'ny herinaratra.
4.Constant current or constant power status can be selected accordingly to achieve a higher efficiency of heating;
5.Display ny hery manempotra sy ny fanamafisana ny famantaranandro sy ny hafanam-po osa.
6.Simple ny fametrahana, ny fanorenana dia azo atao amin'ny tsy fahaizana manokana ny olona;
7.Light mavesatra, vitsy kely;
Ny endrika 8.different sy ny haben'ny indraindray dia mety hovana mora foana ny hafanana.
9.Advantages amin'ny modely amin'ny timer: ny hery sy ny fotoana fiasana ny vanim-potoana fanamafisana ary ny fe-potoana voatahiry dia azo ampiasaina, mba hahatsapana tsiranoka fanamafisana tsotra, ity modely ity dia soso-kevitra hampiasaina ho an'ny famokarana famokarana mba hanatsarana ny miverina indray.
Natokana indrindra ho an'ny fefy madinidinika madinika, famonoana, famonoana.
* Fanaovana hentitra amin'ny fehikibo, ny antsy.
* Harden ny fitsaboana ho an'ny andaniny roa ny fehikibo.
* Heating electrode.
* Loko ny tendron'ny saha.
* Famonoana ny fitaovana.
* Fanaraha-maso ny vintsy kely.
* Fanamboarana fanaka na fanamafisana.
* Fanamafisana ny fametahana PCB kely.
* Fanirianana amin'ny firavaka.
* Faniriana ho an'ny ampahany amin'ny fitaovana.
* Loko ho an'ny ampahany amin'ny sary mihetsika.
* Lozam-pifandraisana ho an'ny connexion an'ny DLC.
* Antene mifandray amina tin-lead.
* Eo amina lelan-dandy Coaxial.
* Fanasitranana ireo ampahany madinika.
* Loko ny fitaovana.
* Famonoana ny vata madinika.
* Mamolavola ny vata madinika.
IGBT Power Supply Solid State
Electric Copper miorim-pandehan'ny Power Induction
Magnetic Induction Fandefasana fitaovana